Ilay fitaovana kely manaiky sy mety volavolaina | Fondation des Choisis de Jésus
Ilay fitaovana kely manaiky sy mety volavolaina
2B_09: Anaka, efa miha mifandray bebekokoa hatrany isika. Amin’ny fihaonantsika, ny mahomby indrindra dia ny ifandraisantsika ao anatinao lalina. Mijanóna ho ilay fitaovana kely manaiky sy mety volavolaina eo ampelan-tànan’ny Ray. Amin’ny alalan’izany fanaikena sy fahavononana izany no hahitanao ny tena hanirahana anao dia ny hamela ny Fitiavana hiampita. Avelao ho vontosan’ny Fitiavako ianao satria tena tiako ianao.